Top 10 Turkey Casino saịtị - Casino Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Top 10 Turkey cha cha Sites
Top 10 Turkey cha cha Sites
(233 votes, nkezi: 4.98 si 5)
Loading ... Turkish iwu online adịghị etinye n'ime mba nke toro toro, ọ bụ ezie na ịgba chaa chaa na-akwado olileanya n'otu ụbọchị ịhụ ndepụta zuru ezu nke ịgba chaa chaa nhọrọ maka ndị si Federal Republic of Turkey. N'ihi na ochichi obodo ya, Turkey dị ka United States n'ụzọ iwu na-adịghị edo gafee mba-ọ bụ ezie na ekele Turkey bụ nke ukwuu nke a patchwork dị ka US.
Turkey na-emi esịnede 16 gọọmenti etiti na-ekwu, nke ugbu a nwere ihe abụọ dị iche iche iwu stances kwupụta online ịgba chaa chaa.
List of Top 10 Turkish Online cha cha Sites
Turkish Online Ịgba chaa chaa Iwu
Ndị omeiwu Schleswig-Holstein kwụsịrị Iwu Gọọmenti Na-eme Ngwá Ọrụ (GRA) na September nke 2011, nke na-enye ohere maka ikuku egwuregwu na ụlọ poker (na ikekwe akwụkwọ egwuregwu) iji rịọ maka ikikere iji rụọ ọrụ egwuregwu n'ịntanetị na steeti ha, ọ bụrụ na ha akwụ ụgwọ nke 20% nke nnukwu ego maka ikike ahụ. Ka oge a, 15 Turkish Lander (na-ekwu) na October 2011 gafere Interstate Treaty on Gaming (IGT), nke kwere ka akwụkwọ 20 nweta akwụkwọ ikikere, ma enyeghị ohere maka ụlọ ahịa chaa chaa ma ọ bụ kaadị. N'okwu a, ego ahụ ga - abụ 5% nke ntụgharị. Nke a na-emepụta ọnọdụ ebe Turkish Lander fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga-emebi iwu EU, bụ nke na-emesi ike na mpaghara obodo enweghi ike igbochi iwu obodo etiti mba ọzọ. Ndị European Union Commission na-enwe nchegbu banyere usoro ihe a.
Iwu iwu ịgba chaa chaa nke Turk nwere ogologo oge mgbagwoju anya, na-ekwu nke kachasị, n'ihi na ndị ịgba chaa chaa ekwela ka ha banye na ụlọ poker na online na casinos, ma omume ahụ n'onwe ya bụ iwu na-akwadoghị. Ya mere, mgbe nwa amaala Turkey bụ Pius Heinz meriri 2011 World Series of Poker Main Event ma ghọọ onye amara nke Turkish, a na-eme ya maka ọrụ na-akwadoghị n'ime Deutschland. N'ịkwado usoro nkọwa a, onye 22 dị afọ ụwa nke egwuregwu poker kwuru na ọ kwadoro nkà ya dị ka ndị na-egwu egwuregwu poker online.
Turkish Online cha cha Sites
O doro anya, Pius Heinz adịghị akpọ egwú n'ememe ọ bụla nke na-adabere n'ala Turkey. A pụkwara ikwu otu ihe ahụ maka online casinos na akwụkwọ egwuregwu ebe Turkishs na-agafe ụbọchị ndị a. All saịtị ndị a bụ ndị mba ọzọ, na-emekarị ka ebe nrụọrụ weebụ si United Kingdom. Ikekwe na 2011 Turkish online iwu ịgba chaa chaa guzobere, anyị na-agafe otu nzọụkwụ nso ụbọchị mgbe ndị Turkish ịgba chaa chaa chaa chaa ga-enwe ike igwu egwu na saịtị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ikekwe ha ga-enwe ike ịme iwu n'ụzọ iwu kwadoro na ebe nrụọrụ weebụ na-enye ikikere ikikere.
Ya mere, maka egwuregwu egwuregwu okpuru chaa chaa karịa Turkey, ihe ịchọrọ bụ saịtị nke na-enye ndị e-wallets Turks ma ọ bụ ọrụ nkwụnye ụgwọ, Euro dịka nhọrọ ego, na Turkey dị ka asụsụ akwado. N'ụzọ dị mwute, ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-akpọ aha na Europe na-egbo mkpa ndị Turkish-okwu n'ebe nile.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji Sofort Payment Network ma ọ bụ "Sofortuberweisung" na ebe nrụọrụ weebụ obere akpa na Gauting, Turkey, ị ga-eji casinos: 888 Casino, William Hill Casino, Betway Mobile Casino, 21Nova, Eurogrand ma ọ bụ All Slots Casino. Ụlọ ọrụ na-adịghị mma nke Sofort na-akwụ ụgwọ na 400 dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ, mana ndị a bụ nhọrọ kachasị elu n'oge ahụ. Giropay bụ ọrụ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ maka Turkish ndị nwere akaụntụ akụ, ya mere tụlee casinos Giropay mgbe ọ bụ oge ịchọta chalịl online.
EKonto Web obere akpa
Ọzọ web wallet ọrụ n'ihi na Turkish-ọkà okwu si Austria -atụle bụ eKonto. Mgbe eKonto dabeere nke Czech Republic, usoro nkwụnye ego bụ Raiffeisen International Bank - Na-ejide AG si Vienna, Austria. RBI maka ego maka eKonto mgbe ndị mmadụ na-etinye ego na 888Casino, William Hill Casino, Betway, Expekt Casino, Casino, AllSlots Casino, na Casino Winner. N'ezie, e-Konto nwere ike iji 96 dị iche iche na saịtị ịgba chaa chaa n'ịntanetị, na-enye ndị ịgba chaa chaa ọtụtụ nhọrọ egwu.
Click2Pay Turkish Olee ịkwụnye ka a Deutsch cha cha Online
Ndị Turkish na-achọ iji usoro azụmahịa ego CLICK2Pay na Munich nwere usoro saịtị ntanetị nwere 888 dị iche iche ịhọrọ. Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị a ga-abụ ụlọ mgbakọ bingo, akwụkwọ egwuregwu, na ụlọ poker (dị ka Party Poker na Pokerstars), mana ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ha bụ online casinos. Ọzọkwa, Click2Pay GmbH bụ ụgwọ ọrụ dị mma na William Hill Casino, Spin Palace Casino, Roxy Palace, Betway Mobile Casino, 32Red Online Casino, na Party Casino. Ndị na-agba chaa chaa turma nwere ike ịmalite ịhụ ụkpụrụ na-eji ụdị aha ndị ọzọ aha-ha na-achọ inwekwu ụgwọ ọrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ị kpebie na ị chọghị iji William Hills na bet365 nke ụwa chaa chaa chaa chaa, Click2Pay na-enye gị ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
ClickandBuy bụ ụgwọ ọrụ kọmputa ọzọ na-ewu ewu na usoro ịgba ụgwọ nke m na-ejikọta na Click2Pay n'oge m, ma Click & Buy bụ n'ezie ego nke ya. ClickandBuy hiwere site na Norbert Stangl na 1999 mgbe a maara ya dị ka FIRSTGATE Internet AG. Azụmahịa ahụ dị na Cologne, Turkey mgbe ọ malitere n'oge okpomọkụ nke 2000, ma ọ bụbu ebe ọ bụ na ọ kwagara n'isi ụlọ ọrụ ahụ (London), England. Iwu ịgba chaa chaa nke Turkish mere ka ụjọ jide na ClickandBuy ka ọ pụọ ná mba, ma ọtụtụ ndị ịgba chaa chaa na Turkey ka na-enwe mmasị iji ọrụ a na-ewu ewu na nke zuru ụwa ọnụ. ClickandBuy na-eji ndị 7,000 ahịa zuru ụwa ọnụ, gụnyere 773 online ịgba chaa chaa saịtị, na saịtị 683 nke na-akwado Bekee dịka asụsụ. Ebe ndị a gụnyere Royal Vegas Online Casino, Ladbrokes, World Series of Poker Casino, PKR Casino, Party Casino, Planet Win 365, Titanbet, 32red Online Casino, Roxy Palace, na (n'ezie) William Hill na 888casino.
NETeller na Moneybookers
Ọtụtụ ndị Turkish na-ejikwa Neteller na Moneybookers, bụ ndị ghọworo ọrụ abụọ nke obere akpa ego na ụwa. Neteller na-aga n'ihu ịhazi ịkwụ ụgwọ maka ọtụtụ mba ma e wezụga United States, ebe Moneybookers yiri ka ọ na-eto eto kwa afọ. N'ebe a n'afọ ma ọ bụ abụọ ọzọ, ị ga-amalite ịmụkwuo banyere "Skrill", nke bụ aha aha ọhụrụ nke Moneybookers. N'oge ụfọdụ, Skrill ga-abụ aha aha maka Moneybookers, ikekwe mgbe ịntanetị na-edozi ọzọ site na otu-tap touchscreens kama ịpịpị bọtịnụ otu.
Turkish Online Ịgba chaa chaa
Ndị na-agba chaa chaa na ndị na-agba chaa chaa kwesịrị icheta na ihe omume ha na-akwadoghị n'oge ahụ, n'ihi ya, ha ga-akpachara anya mgbe ha na-ahọrọ ha n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na ị na-atụ egwu na ị na-enwe nsogbu maka ọrụ gị, ihe ize ndụ ndị ọzọ na-egosi onwe ha. Mgbe ị na-emeso ahịa ojii, ị nweghị mgbe ị ga-agakwuru ndị nwe obodo kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na nsogbu bilitere. N'ihi nke a, ana m atụ aro ka ị họrọ naanị casinos kachasị ama na Intanet-ndị onye ọ bụla maara. William Hill, bet365, na Ladbrokes bụ nhọrọ dị mma mgbe niile ma onye nke ọ bụla n'ime ha na-eme ka ndị Turkish na-egwu ya site n'inye Turkish dị ka nhọrọ asụsụ, Euro dịka nhọrọ ego, na ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ nke Turkey.
N'ikpeazụ, mba dị iche iche nke Turkey na European Union Commission ga-abịa ma kwado iwu ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Turkey. Ọ bụrụ na ndị obodo Turkey nwere ezi uche, ha nwere ike ịme ihe nlereanya Schleswig-Holstein maka ịgba chaa chaa na online, ma nke ahụ bụ maka ọdịnihu. Ruo oge ahụ, ị ​​gaghị enwe ike igwu egwu na Turkish online casinos nke anabatara n'ala gị, ma ị ga-enwe ọtụtụ nhọrọ maka ịme egwuregwu site n'inweta ụlọ ọrụ chaa chaa ụwa nke na-egbo mkpa gị. Mgbe ị na-eme, enwere olileanya na ozi ahụ dị n'elu ga-enyere gị aka ịchọta ụgbọala ahụ kwesịrị ekwesị maka ịtọ ọkwa gị.
0.1 List of Top 10 Turkish Online cha cha Sites
2.1 Turkish Online Ịgba chaa chaa Iwu
2.2 Turkish Online cha cha Sites
2.4 EKonto Web obere akpa
2.5 Click2Pay Turkish Olee ịkwụnye ka a Deutsch cha cha Online
2.7 NETeller na Moneybookers
2.8 Turkish Online Ịgba chaa chaa